တင်ဒါပင်လယ်ကွေ့ဆိပ်ကမ်း၏ Oyak Holding ကုမ္ပဏီကြေညာချက်များရလဒ်များ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliတင်ဒါပင်လယ်ကွေ့ဆိပ်ကမ်း၏ Oyak Holding ကုမ္ပဏီကြေညာချက်များရလဒ်များ
31 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
OYAK Holding ကုမ္ပဏီပင်လယ်ကွေ့ဆိပ်ကမ်းကိုတင်ဒါ၏ရလဒ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်
Erdemir သံမဏိကိုလည်းYarımcaပင်လယ်ကွေ့ Oyak ဦးပိုင်အတွက်ကြွေစက်ရုံနှင့်အတူဆိပ်ခံတံတားဝယ်ခရိုင်၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတည်ရှိပြီးသောစက်ရုံ, ပိုင်ဆိုင်သည်။
သူကဒူဘိုင်းနှင့်ဒူဘိုင်းမှ Oyak Holding ကုမ္ပဏီကွတ်ကီးပိုက်ဆံဝယ်ယူပြည်မှမိမိအတစ်ဝက်တစ်ဦးဆိပ်ကမ်းကိုဤနေရာတွင်ဒူဘိုင်းဆိပ်ကမ်းအမည်ရှိဖန်ဆင်းတော်မူပြီရောင်းချခဲ့သည်။
ဆိပ်ကမ်းသူ့ဟာသူအပေါ်ပြည်မှ 100 ဧကအကြောင်းကိုစေရန် Oyak Holding ကုမ္ပဏီကြွင်းသောပြည်နယ်လျှောက်ထားဖို့ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ဆိပ်ကမ်းဖေဖော်ဝါရီလ 25 အပေါ်တစ်ဦးနူးညံ့ဖွင့်လှစ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဆိပ်ကမ်းတင်ဒါ Kalyon- လအတွင်းဖျောမိတ်ဖက် Kolin ရလဒ်များနှင့် Tekfen ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူပင်လယ်ကွေ့ဆိပ်ကမ်း Oyak ဦးပိုင်အတွက် Kalyon- မိတ်ဖက် Kolin ၏နူးညံ့သောအနိုင်ရသော။ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဤသည် port ကိုကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်စေမည်အကြီးမားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Oyak Holding ကုမ္ပဏီ၏ပင်လယ်ကွေ့တွင်လက်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆိပ်ကမ်း၏ 100 နှစ်ပတ်လည်နေ့ Oyak ဦးပိုင်ပင်လယ်အဆာ, မြေယာအပါအဝင် 80 ဧကခန့် built ဖြစ်စေမည်
ပင်လယ်ကွေ့ဆိပ်ကမ်းတင်ဒါ၏ Oyak Holding ကုမ္ပဏီကြေညာချက်များရလဒ်များအဘယ်ကြောင့်မခံသနည်း 06 / 05 / 2019 ငါတို့ရှိသမျှသည် Oyak Holding ကုမ္ပဏီYarımcaအဆိုပါဆိပ်ခံကြွေစက်ရုံနှင့်အတူဝယ်ပြီးလျှင်သိပင်လယ်ကွေ့ကောင်တီမှာတည်ရှိသော Erdemir သံမဏိစက်ရုံမှာလည်း၎င်းတို့၏ကန့်သတ်ရှိသည်။ သူပွညျသားသည်သူ၏ထက်ဝက်ဒူဘိုင်းဆိပ်ကမ်းကဒီမှာအမည်ရှိဆိပ်ကမ်းကိုလုပ်နေကြသည်ဒူဘိုင်းနှင့်ဒူဘိုင်းမှကွတ်ကီးပိုက်ဆံ Oyak Holding ကုမ္ပဏီဝယ်ယူရောင်းချခဲ့သည်။ Oyak ဦးပိုင်ပြည်နယ် application ကို လုပ်. , ဆိပ်ကမ်းလုပ်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပွညျသူပွညျသား 100 ဧကနှင့် ပတ်သက်. ဆိပ်ကမ်းစေရန်မိမိကိုမိမိအပေါ်၌ကျိန်းဝပ်။ Oyak ဦးပိုင်စေမည်သော port ၏အရွယ်အစားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမှကြီးစွာသောတုံ့ပြန်မှု 180 စုစုပေါင်းဧကကိုရှာဖွေပြသသည်။ ပြည်, ပင်လယ်အပါအဝင်ဧက, ပြည့်ဝဖို့ 100 80 န်းကျင်ဖွင့် ...
TCDD က Man သင်္ဘောဝယ်ယူခံတွင်းစာမေးပွဲရလဒ်များကြေညာ 16 / 05 / 2018 တရားဝင် website တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ကြေငြာချက်အရသိရသည်တူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထား; ကူးတို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့သင်္ဘောသားများသည်အဘို့အVangölü 13.04.2018 ညွှန်ကြားမှုအပေါ်ကျင်းပပါးစပ်စာမေးပွဲရလဒ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ သို့သော်လက်လှမ်းရလဒ်များ၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်အညီမြင့်မြတ်သောဆုရှင်ကြေငြာချက်ထုတ်ဝေနှင့်အနိုင်ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုအစားထိုး၏အမည်များစာရင်းတစ်ခုအဖြစ် shared ။ ဒါဟာ Publish အသိပေးစာတဲ့အခါ? ပြည်နယ်ဝန်ထမ်းရေးရာစုဆောင်းမှုနိုင်ငံတော်သမ္မတကဖေဖော်ဝါရီလ 27 2018 အပေါ်ထုတ်ဝေကြော်ငြာတွေနဲ့လျှောက်လွှာမတ်လ 8 2018 သည်အထိဆက်လက်ခံရဖို့ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ Applications ကိုမှတ်ချက်ချခဲ့သည်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်ရှိခြင်းရပါမည် Teo မှတဆင့်ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ နိဂုံး ...
ဧပြီလ 27 အတွက်အကြိမ်ကြိမ်ခံရဖို့ Izmir ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းများ၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 09 / 04 / 2018 Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့ပါဝင်ကုမ္ပဏီအများစု၏ Pre-qualification လိုအပ်ချက်များကို၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်နိုင်ငံတကာတင်ဒါကစီစဉ် "ပင်လယ်ကွေ့နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း", ဧပြီ 27 အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲပါလိမ့်မည်။ ရေတိမ်ပိုင်းကိုနောက်ကောက်ထက်သာလွန်၏ Izmir ပင်လယ်ကွေ့ Izmir ရေနှင့် Sewerage အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏İzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စေရန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ "re-skin နိုင်ပါတယ်" နိုင်ငံတကာအကြံပေးတင်ဒါ၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ "ပင်လယ်ကွေ့နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေး" ကုမ္ပဏီတွေစာရွက်စာတမ်းနုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီတင်ပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထပ်, အရေးပါသောခြေလှမ်းစည်းရုံး။ 13.5 နက်ရှိုင်း 250 မီတာအတွက်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများဖွင့်လှစ်, 8 မီတာကျယ်ပြန့်သည်ပင်လယ်ကွေ့၏မြောက်ပိုင်းဝင်ရိုးရှည်ကီလိုမီတာ, လာမယ့်နောက်ကျော channel ကိုÇiğliစွန့်ပစ်ရေကုသမှုစက်ရုံထဲကနေ dredged ပစ္စည်း 25 သန်းကုဗမီတာရှိလိမ့်မည် ...
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးတင်ဒါကောက်ချက်ချ 07 / 09 / 2018 သုံးဇာတ်စင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြံပေးတင်ဒါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်း Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့ "ပင်လယ်ကွေ့နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း" အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ Plus အားစီမံကိန်းအတွက်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ join ဖို့ xnumx ရဲ့နိုင်ငံခြား612 ကုမ္ပဏီ၏တင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမြောက်ပိုင်းတစ်နှစ်အတွက်ပင်လယ်ကွေ့ရိုး, ပြန်လည်ဒေသများနှင့်ဤဒေသများသို့လွှဲပြောင်းဘို့စီမံကိန်းများကိုပြင်ဆင်ထားရန်ကျွန်း၏သဘာဝဘဝကိုအတူ dredged ပစ္စည်းအတွက်ဖွင့်လှစ်ခံရဖို့ channel ကိုများအတွက်စိစစ်မှုနည်းလမ်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုနောက်ကောက်ပင်လယ်ကွေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့် "Izmir ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း၏" ရည်မှန်းချက်ရောက်ရန်ပြင်ဆင်ထားတစ်ဦးထက်ပိုအရေးကြီးသောအဆင့်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည် "သင်ပင်လယ်ကွေ့ရေကူးနိုငျသညျ" shoaling ကာကွယ်တားဆီးဖို့။ အဆိုပါ EIA ကို၏ပြင်ဆင်မှုစီမံကိန်းအဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ...
Bursa Oyak Renault ၏ခေါင်းဆောင် 28 / 10 / 2014 Oyak Renault က Bursa ရဲ့ခေါင်းဆောင်: "Bursa ရဲ့ပထမဦးဆုံး 250 အကြီးစားကုမ္ပဏီများစစ်တမ်း" ဟုအဆိုပါမြို့တွင်အကြီးဆုံးစက်မှုကုမ္ပဏီအညီ 8,6 ဘီလီယံကိုပေါင်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှင့်အတူ Oyak Renault ကဖြစ်ခဲ့သည်။ Tofaş, Oyak Renault က 7,3 ဘီလီယံကိုပေါင်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ BCCI ဥက္ကဋ္ဌ Bursa Burkay အတွက်ခိုင်မာတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်သူမွို့၌ xnumx'y ရာခိုင်နှုန်းခန့်အလုပ်လက်မဲ့ကျဆင်းသွားခဲ့သည်ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ Bursa ၏အကြီးဆုံးစက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Bursa စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှု (BCCI) ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းယခုနှစ် 6,6 လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အသုံးပြုပုံတင်ပို့မှုနှင့်မြို့ရဲ့အကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်း companyb သည်မှန်လျှင်, Bursa ရဲ့ပထမဦးဆုံး 2013 အတွက်အကြီးစားကုမ္ပဏီများ၏ '' စစ်တမ်းအကောင့်သို့ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်အကိုင်အဖြစ်စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများယူပြီးလုပ် ...
OYAK တည်ဆောက်နေ INC 28 / 02 / 2010 ကုမ္ပဏီတရားဝင် Celalettin အသက်ဥက္ကဋ္ဌ Oguz DEMİRKILIÇမှ General Manager Hüseyin Beech လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Nuvit BOLTÜRKနည်းပညာဆိုင်ရာ Manager ကိုဗဟိုရိုးရာလမ်း, Oyak စီးပွားရေးစင်တာတွင် 50 / 1 34734 Sahrayıcedit, Kadikoy, အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီလျ: (216) 359 53 01 ဖက်စ်: (216 ) 359 53 11 အီးမေးလ်: bilgi@oyakinsaat.com.t http ဖြစ်ပါသည်: //www.oyakinsaat.com.t ACTIVITY အား•အိမ်•ဆေးရုံနှင့်ကျန်းမာရေးစင်တာများ•ဟိုတယ်•စျေးဝယ်ကုန်တိုက်•စက်မှု်ဆောင်မှုများ•မြေယာဖွံ့ဖြိုးရေး•စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ်ဆောင်မှုများဒေသများတွင်ဖြစ်ပါသည် •ဆိပ်ကမ်း•အခြေခံအဆောက်အအုံ•လမ်းများနှင့်ပိုက်လိုင်း
တစ်နှစ်တာမှတ်ပုံတင်မည်၏ Oyak Renault က Automotive ကုမ္ပဏီ 12 / 12 / 2018 တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးကားထုတ်လုပ်သူ Oyak Renault က, တူရကီရဲ့အသက်အကြီးဆုံးကျောင်းသားတစ်ယောက်-လူသိများကလပ်ရဲ့ Bogazici တက္ကသိုလ်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ရပ်အင်ဂျင်နီယာ Society က "Executives နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲမှုလေ့လာမှု (MSA ကို) 2018" တစ်နှစ်တာ၏ "Automotive ကုမ္ပဏီအတွက် Bogazici စီးပွားရေးဆုပေးပွဲကစီစဉ်ဖုံးလွှမ်းအဖြစ် "ဟုသူကရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Bosphorus စီးပွားရေးဆုပေးပွဲနှစ်တိုင်း "စီမံခန့်ခွဲမှုလေ့လာမှုနှင့်အတူ Executives" ဟုအဆိုပါရှင်းလင်းပွဲအတွင်း (MSA) စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှု, အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများစစ်တမ်းများ၏ရလဒ်များကိုထံမှစိတ်ပိုင်းဖြတ်နေကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီအဖြစ် Oyak Renault ကစီစဉ်စစ်တမ်းများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများတွင်ကျင်းပပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူ 16 အတွက်အဖွဲ့အစည်းများ, ပထမဦးဆုံးဌာန၌ "Automotive ကုမ္ပဏီတစ်နှစ်တာ၏" အမျိုးအစား။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 10 Bosphorus ...
Oyak Renault ကအင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကနေမှတ်တမ်း 11 / 01 / 2019 602 421 တထောင်ထုတ်လုပ်တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမော်တော်ယာဉ်နှင့်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူ Oyak Renault ကအင်ဂျင်အသစ်တစ်ခုစံချိန်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားတဲ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပို့ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်လမ်းပြရန် Oyak Renault ကတစ်ကြိမ်ထက်ပိုအားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။ 2019 နှစ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုသွင်းအားစုအတွက်စံချိန်ကိုချိုးဖောက် Oyak Renault က။ သူတို့ရဲ့ဂီယာအုံ, တနှစ်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာ 2018 602 421 အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုဖျော်ဖြေ, တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးပေါင်းစည်းမော်တော်ကားကုမ္ပဏီ Oyak Renault ကထုတ်လုပ်သည့်ကိုယ်ထည်နှင့်အင်ဂျင်အသစ်တစ်ခုစံချိန်ချိုးဖဲ့။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဆိုပါဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူသစ်ကို High-ဖိအားသေ-ကိုနှင်ထုတ်လူမီနီယံ Oyak Renault ကစက်ရုံ, "သုညချွတ်ယွင်း, သုညမတော်တဆမှု" အလုပ်၏အုတ်မြစ်ချ ...
Oyak Renault ကလူငယ် Friendly နည်းပညာစိုက်ပျိုးရေး 29 / 06 / 2019 Bursa Oyak Renault ကနေအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများအတွက် "သူက6ထိပ်တန်း Value ကိုရေးအဖွဲ့ @ Hacker" ဟုအဆိုပါစီမံကိန်း၏မူဘောင်အတွင်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းအားပေးနိုင်ရန်အတွက်လူငယ်များခြင်းဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မတ်လ-ဇွန်လဖုံးအုပ် Oyak Renault က, နွေဦးစဉ်အတွင်းအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည့်ကျောင်းသားများ,3ဒီဇိုင်းအအောင်မြင်ဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ ဒီနှစ်ကို "ကို Hack @ သူ6အဖွဲ့ထိပ်တန်း Value ကို" စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစတင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းစုဆောင်းခြင်း၏ကျောင်းသားများအတွက် Oyak Renault ကအားသာချက်သူတို့ကိုအစစ်အမှန်စက်မှုပြဿနာများအသစ်အတွေးအခေါ်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ Oyak Renault က, စီမံကိန်းက "သူက6ထိပ်တန်း Value ကိုရေးအဖွဲ့ @ Hacker က" တီထွင်ဆန်းသစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်အတူလူငယ်များ၏အားပေး။ Bursa နည်းပညာပိုင်းကိုပရိုဂရမ်ထဲမှာပါဝင်များနှင့် ...
B-MAX ဦးပိုင် GmbH သည် 21 / 12 / 2010 နေရပ်လိပ်စာ: Flurstr ။ DE 25 - 58285 Gevelsberg ဖုန်းနံပါတ်: + 49-2332 / 55 82 02 ဖက်စ်: + 49-2332 / 66 29 74 E-Mail က: info@abmax-group.co အငျတာနကျ: ဆက်သွယ်ရန်: Herr Dirk Bubenzer
ပင်လယ်ကွေ့ဆိပ်ကမ်းတင်ဒါ၏ Oyak Holding ကုမ္ပဏီကြေညာချက်များရလဒ်များအဘယ်ကြောင့်မခံသနည်း
ဧပြီလ 27 အတွက်အကြိမ်ကြိမ်ခံရဖို့ Izmir ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းများ၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
Bursa Oyak Renault ၏ခေါင်းဆောင်
OYAK တည်ဆောက်နေ INC
တစ်နှစ်တာမှတ်ပုံတင်မည်၏ Oyak Renault က Automotive ကုမ္ပဏီ
Oyak Renault ကအင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကနေမှတ်တမ်း
Oyak Renault ကလူငယ် Friendly နည်းပညာစိုက်ပျိုးရေး
B-MAX ဦးပိုင် GmbH သည်